Dowladnimada iyo Ka Qaybgalka Bulshada - Helitaanka Ka Sinaanta Caalamiga ah
Maamulka iyo Ka Qeybgalka Bulshada
EAI waxay kobcisaa ka-qaybgalka bulshada sidii hab lagu dhiirrigeliyo ka-qaybgalka dadweynaha si loo hagaajiyo maamulka maxalliga ah. Si loo gaaro yoolkaas, EAI waxay ku hagtaa shakhsiyaadka iyo kooxaha muwaadiniinta iyada oo loo marayo tababbro taxane ah oo isbadal ah oo ay kuxirto fursadaha ka qaybgalka bulshada. Natiijo ahaan, bulshada iyo muwaaddiniintu waxay u qalabaysnaayeen sidii ay uga gudbi lahaayeen carqaladaha qaab-dhismeedka carqaladeynaya kaqeybgalkooda horumarinta siyaasada guud, qoondaynta kheyraadka dadweynaha iyo qeybinta, iyo kormeerka gaarsiinta adeegga dadweynaha. EAI waxay awood u siineysaa bulshooyinka inay yeeshaan cod arrimaha ku saabsan danaha dadweynaha waxayna taageeraan hay'addooda asalka u ah inay si wax ku ool ah ula fal galaan mas'uuliyiinta dowladda. Waxaan bixinaa aalado taageeraya shaqsiyaadka iyo bulshada si ay ugu doodaan isla xisaabtanka iyo daah furnaanta. Barnaamijyadeenna ayaa isu keenaya daneeyayaasha ay quseyso oo ay ku jiraan muwaaddiniinta, hoggaamiyeyaasha bulshada rayidka ah, hoggaamiyeyaasha dhaqanka, wakiillada la soo doortay, dowladdaha hoose, bixiyeyaasha adeegga bulshada, iyo hay'adaha sharci fulinta si ay ugu qeexaan xallinta xalalka dowladnimo ee waara iyada oo loo marayo wada-hadallo dhinacyo badan taabanaya. Hababkeenna waxay dhiirrigelinayaan tallaabo waarta oo ka dhaceysa bulshooyinkayaga oo hubinaya in muwaadiniintu sii wadaan dhiirrigelinta tallaabada madaniga ah ka dib dhammaystirka barnaamijka.
Sannadkii 2014, EAI waxay soo saartay kii ugu horreeyay noociisa oo ah 24/7 xarun telefishan oo ku baxa luuqadda Ingiriisiga oo saldhigeedu yahay dhisidda nabadda iyo madaddaalada. Kanaalka ayaa xoojiyay dhaqanka hodanka ah ee Woqooyiga kuna dhiirrigeliyay malaayiin daawadayaal ah in ay ku mashquulaan - iyaga oo u duubaya No.1.
AREWA24: Markii ugu horreysay 24/7 telefishanka satalaytka luqadda Ingiriisiga ah ee N. Nigeria
Si loo xoojiyo baahida loo qabo maamul hufan oo lala xisaabtamo lana xoojiyo codadka jilayaasha la-dagaallanka musuqmaasuqa, EAI waxay fulineysaa mashruuc dhinacyo badan leh si loo wanaajiyo wacyiga iyo wadahadalka u dhexeeya muwaadiniinta iyo dowladda. 2018-xaadir
Ku xoojinta taageerada warbaahinta ee la xisaabtanka bulshada
Dimuqraadiyad caafimaad qabta waxay ku dhisan tahay tiirarka sinnaanta bulshada iyo caddaaladda. EAI waxay ka jawaabaysaa baahiyahan iyada oo la xoojinayo ka-qaybgalka bulshada ee heer-hoosaad iyada oo loo marayo warbaahinta, isgaarsiinta, ICT4D, iyo wacyigelinta tooska ah ee bulshada. 2016-xaadir
Bulshada Rayidka: Mashruuca Isla-xisaabtanka Wadaagga ah (CS: MAP)
Gobollada Pakistan ee ay ka adkaadeen xagjirnimada rabshadaha wata, EAI waxay nabad ku soo qaadatay masraxa iyo riwaayadaha raadiyaha iyagoo baadi goob ugu jira khilaafaadka. Tallaabo Tallaabo (Kadam Pa Kadam) waxay adeegsatay sheekooyin khayaal ah oo ku saabasan haweenka da'da yar si loo helo wadahadal dhab ah.
Peace Caravan iyo Kadam Pa Kadam (KPK, talaabo talaabo) barnaamijka raadiyo
Mashruucan wuxuu isku duubay adeegga wareejinta lacagta wareega ee Wing si uu u keeno aqoon-isweydaarsi lacageed dhallinta aadka ugu baahan.
Kaamboodiya, Wadamadii hore
Waan qaban karnaa
EAI waxay naqshadeysay barnaamij isbedel dabeecadeed oo saameyn sarre leh oo ay ka mid tahay horumarinta USAID ee Dhiirrigelinta: Haweenka istaraatiijiyadda isgaarsiinta ee dowladda, taxane idaacadeed, aqoon isweydaarsiyo iyo istiraatiijiyad qoddobo qoto dheer ah oo lagu dhiirigelinayo haweenka inay codsadaan shaqooyinka dowladda.
Afghanistan, USAID Dhiirrigelinta: Haweenka ku jira Dowladda; Chemonics
Jaan-gooynta haweenka reer Afgaanistaan ​​ee dowladda
Sanadkii 2012, tababarayaasha warbaahinta ee ka socda EAI waxay ku hawlan yihiin dhalinyarada bulshada iyo xarumaha raadiyeyaasha si ay u bixiyaan macluumaad muhiim ah oo dhiirigelinaya isfahamka iyo is-dhexgalka mid ka mid ah xilliyadii ugu adkaa ee taariikhda dhowaan.
Côte d'Ivoire, Wadamadii hore
Tababarrada warbaahinta iyo hogaaminta ee Côte d'Ivoire
Jawiga ay dawladdu maamusho ee Laos, ka hadalka dimuqraadiyadda waa mamnuuc. Hase yeeshe iyada oo loo sii marinayo Mashruuca Fidinta Lao Raadiyaha Lao ee 2010, EAI waxay gacan ka geysatey in barnaamij maskax raadin ah, barnaamij dhalinyaro ah horseed u leh barnaamij degmo oo ku yaal waqooyiga Laos.
Laos, Wadamadii hore
Shaybaarka Lao wuxuu fidiyaa helitaanka macluumaadka
Intii lagu jiray kala guurka siyaasadeed ee Yemen, EAI wuxuu adeegsaday filimo, tartamo tiyaatar ah, iyo istiraatiijiyado kale oo ku lug leh si loogu wargaliyo dhalinyarada Yaman xuquuqdooda. Iyaga oo lagu rakibay aqoontan, dhallinyardu waxay ku biireen ka qeyb qaadashada caawinta beelahooda
Wadamadii hore, Yemen
Dhalinyarada Yamaanida ee XUQUUQDA
Yemen, oo ah wadan ay dhalinyaradu ka kooban tahay 70% dadka, Ololaha Macluumaadka Dadweynaha ee Sannadka 2013 ee WASL ayaa qabtay ololeyaal dadweyne oo laga keenay fanaaniinta waxayna soo saareen barnaamijyo raadiyo ah oo dhalinyarada loogu talagalay inay ku dhiirrigeliyaan ka qeybgalka bulshada.
Dhiirrigelinta kaqaybgalka bulshada rayidka ah ee Yemen: Ololaha Macluumaadka Dadweynaha ee WASL
Dib-u-habeynta FATA ee sii socota iyo mashruuca ka qeybqaadashada bulshada ayaa la hirgaliyay intii u dhaxeysay 2014-2017 si loogu wargaliyo, waxbarida, iyo in si firfircoon looga qeybqaato muwadiniinta aagaga Maaraynta Qabaa'il ee Fedaraalka (FATA) ee dib-u-habeeynta gobolka.
Sii kordhinta Dib-u-habeynta FATA (FFR)
Bandhigan raadiyaha ee caanka ah wuxuu dhiirrigeliyay muwaadiniinta reer Nepalese inay si firfircoon uga dhex shaqeeyaan bulshadooda iyagoo siinaya macluumaad ku saabsan mowduucyada siyaasadeed ee la xiriira nolosha dhageystayaasha.
Gaar ah: Naya Nepal (Barnaamijka Raadiyaha)
Ku guuleysiga abaalmarinta EAI ee 'Barnaamijka Sheekaysiga Saaxiibkeyga Ugu Fiican' wuxuu raadiyaa macluumaad iyo taageero dhalinyarada Nepalese ee ku saabsan arrimaha cadaadiska. Orlando Bloom door door marti ah ayey ka qaadatay barnaamijka ku guuleysiga abaalmarinta. Bandhigga ayaa waxaa ka muuqday CNN.
Wax ka qabashada arrimaha tabeenta iyadoo la adeegsanayo raadiyaha - “La sheekaysiga Saaxiibkeyga Ugu Fiican”
Sanadkii 2010, EAI wuxuu hormuud u ahaa barnaamij dib loogu soo nooleynayo dhalinyarada dagaalkii Afqanistaan ​​ka dib, isagoo ku dhiirigeliyay inay sii joogaan dugsiga ugu dambeyntiina ay u isticmaalaan waxbarashadooda si ay dib ugu dhisaan dalka. 2010
Afghanistan: Mashruuca raadiyaha dhalinyarada ee Pashto
EAI waxay wanaajisay awooda bulshooyinka si ay ula shaqeeyaan dawlada hoose iyo u doodida baahiyahooda iyada oo ah la-hawlgale fulin la ah Pact mashruuca USAID ee ay maalgalisay Sajhedari Bikaas ee Nepal.
Sajhedari Bikkas: iskaashiga horumarka
Bixinta khuraafaadka la xiriira cod bixinta ka soo horjeedka Islaamka ama sharci darro. EAI waxay biloowday barnaamij guud si loo xoojiyo xuquuqda cod bixiyayaasha loona dhiirigeliyo haweenka iyo dhalinyarada inay codeeyaan.
Afghanistan, Waaxda Horumarinta Caalamiga ah ee UK (DFID); Jaamacadda Emory; Golaha Cilmibaarista Caafimaadka Koonfur Afrika (MRC)
Codadka: Taageerida dhalinyarada Afghanistan iyo haweenka inay codeeyaan
Dhisidda kalsoonida maamulka maxalliga ah ee Burkina Faso
Hufnaanta iyo la xisaabtanka Radio-fududeynta ee maamulka maxalliga ah ee Burkina Faso waxay kordhisaa ka qeybgalka bulshada iyo dakhliga canshuuraha.
Nagala soo qaybgal awood siinta hoggaamiyeyaasha bulshada ee u ololeeya daah furnaanta, jawaab-celinta, iyo la xisaabtanka xukuumadda.